अन्तराष्ट्रिय Archives - Page 309 of 323 - Sawal Nepal
आफ्नै बाबुकी श्रीमती बन्ने यि कस्ती छोरी….
अचम्म लाग्ला, एक छोरी आफ्नै बाउकी श्रीमती बनिन् भनेको सुन्दा । तर यो सत्य हो । घटना हङकङको हो । सौतेनी आमा भित्रिन नदिन ती युवतीले आफ्नै बुवासँग यौन सम्बन्ध राखेकी हुन् । उनी आफना बाबुले भित्र्याउन लागेकी दोस्रो पत्नीलाई चिन्थिन । र उनलाई उनी मन पराउँदैन थिइन् । त्यसैले उनी आफ्नै बुवासँग सुतिन् ।
शाहरुख खान यसरी झण्डै मरे !
अभिनेता शाहरुख खान फिल्म शूटिंगका क्रममा घाइते भएका छन् । आनन्द एल रायको फिल्मको शुटिङको बीचमा फिल्म सुटिङको शेटमा भएको दुर्घटनामा परि शाहरुख खान घाइते भएका छन् । उनीसँगै अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा शाहरुख खानको ज्यान बल्लतल्ल बचेको आजतकले जनाएको छ । जुन बेला शाहरुख खान सुटिङका लागि सेटमा उपस्थित थिए
मन्त्रि बियर पसलको उद्घाटनमा गएपछि
उत्तर प्रदेशको योगी सरकारमा महिला कल्याण राज्यमन्त्री रहेकी स्वाती सिंह बियर पसलको उद्घाटन गर्न गएपछि विवादमा परेकी छन् । यसले योगी सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमको विश्लेषण छ । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले यसबारे स्वाति सिंहसँग स्पष्टीकरणसमेत लिइसकेका छन् । स्वाति सिंहले बियर पसलको उद्घाटन गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचित भएको छ
यो हेरेर को नरोला र ? कठै यस्तो त कसैलाइ नहोस्
भोपाल । भारतको मध्यप्रदेश राज्यस्थित भोपालमा एउटा हृदयविदारक घटना प्रकाशमा आएको छ । बुधबार बिहान स्थानीय रेल स्टेशन कै गेटमा एक महिलाको शव फेला परेको छ भने उनको शवसँगै १७ महिने बालक लुटुपुटु गरिरहेको अवस्थामा स्थानीयले उद्धार गरेका छन् । स्थानीय समय अनुसार बिहान ६ बजे स्थानीयले महिलाको शवसँगै बालकलाई फेला पारेका हुन् । टाउकोमा
कोलम्बो, १२ जेठ । श्रीङ्काको दक्षिणी क्षेत्रमा शुक्रबार गएको पहिरोमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने, अरु कैयौ व्यक्तिहरु हराईरहेका छन् । कालुतारा क्षेत्रमा शुक्रबार निकै ठुलो हावाहुरी र भीषण बर्षापछि पहिरो गएको स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरुलाई खोज्नका लागि घटनास्थलमा प्रहरी र उद्धारकर्ताहरु खटिएका
एम्बुसमा परी २० प्रहरीको मृत्यु
अफगानिस्तानको दक्षिण क्षेत्रस्थित साहजोइ जिल्लामा तालिवानले थापेको एम्बुसमा परी २० प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ । सुरक्षा फौजले कारबाही अभियान जारी राखेका बेला तालिवानले गरेको आक्रमणमा परी अन्य १० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार जाबुल प्रान्तमा आक्रमण भइरहेको समय नजिकैको साह जोइमा तालिवानले सुरक्षा फौजलाई लक्ष्ति गरेर एम्बुस थापेको अफ्गानी अधिकारीले
ट्रक र विमान जुध्दा आठ घाइते
लस एन्जलस (संयुक्त राज्य अमेरिका), ७ जेठ । ब्यापारिक उडानमा रहेको एक विमान र यात्रुहरुलाई खाना, पानी आपूर्ति गर्ने एउटा ट्रक लस एन्जलस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वेमा आपसमा जुध्दा आठ जना घाइते भएका छन् । मेक्सिकोको राजधानी मेक्सिको सिटीबाट एरो मेक्सिको एयरलाइन्सको उडान नं. ६४२ बाट एउटा बोइङ्ग–७३७ विमान संयुक्त राज्य अमेरिकाको एन्जलस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
बच्चा चोरको आरोपमा ६ जनाको हत्या
भारतको झारखण्डमा बच्चा चोरको आरोपमा ६ जनाको हत्या गरिएको छ । गाउँबाट बच्चा चोर्न लागेको हल्लाका आधारमा गाउँलेहरुले ६ जनालाई कुटपिट गरी हत्या गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । झारखण्डको दुई गाउँमा नौलो अपरिचित व्यक्तिलाई बच्चा चोर भएको आरोपमा गाउँलेले कुटपिट गरेर हत्या गरेका हुन् । भारतीय संचार माध्यमहरुका अनुसार ४ दिन पहिले पनि यस्तै हल्लाको
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री रिमा लागूको ह्रदयघातका कारण निधन
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री रिमा लागूको निधन भएको छ । लागूको ५९ वर्षको उमेरमा ह्रदयघातका कारण मृत्यु भएको चिकित्सकले जानकारी गराएका छन् । बुधबार अबेरसम्म स्टार प्लस च्यानलबाट प्रसारित भैरहेको टेलिचलचित्र ‘नामाकरण’को छायांकन सकेर लागू घर गएकी थिइन् । राती १ बजे उनले छाती दुखेको बताएपछि परिवारका सदस्यले मुम्बईस्थित कोकिलाबाई धीरुभाई अम्बानी अस्पताल पुर्याएका थिए ।
औसत आयु मापनमा अष्ट्रेलिया चौथो स्थानमा
४ जेठ । बिश्वमा कुन कुन राष्ट्रका नागरिकहरु दीर्घजीवी छन् भन्ने बिषयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय बिश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै एक अनुसन्धानात्मक प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिबेदनमा नागरिकको आयुको औसत लम्बाई मापन सूचिमा अष्ट्रेलिया चौथो स्थानमा उक्लेको जनाइएको छ । यस सूचिको पहिलो दोश्रो र तेश्रो स्थानमा क्रमशः रहेका जापान, सिङ्गापुर र स्विट्जरल्याण्डलाई पछ्याउँदै